May ho avy ny akoho: famaritana, vokatra, orinasa, sary - Poultry farming - 2019
Famaritana momba ny mofomamy amin'ny volana mey
Fantatry ny mpamboly iray za-draharaha fa ny toetra tena ilaina amin'ny horona dia ny famokarana atody, ny fiaretana sy ny fanoherana ny aretina isan-karazany. Ankehitriny, misy karazam-borona maro karazana miaraka amin'ireo toetra ireo. Na dia izany aza, isika dia hiresaka momba ny iray amin'ireo karazam-bolo malaza - Pervomaiskaya, ireo tombontsoa, ​​ireo endri-javatra ary ny anton'izany ho an'ny tantsaha mpamboly.
Ny sandrana sy ny loha
Sakafo sy legioma
Tombontsoa sy tsy fitoviana
Ny May ho an'ny ala no nentina voalohany tany Okraina, tao amin'ny faritr'i Kherson, saingy nisy fambolena goavana natao tany amin'ny faritr'i Kharkiv, tao amin'ny Faritra State Pervomaisky, izay nanome ny anarana ho an'ny biby. Mba hahazoana io karazam-borona io dia nivezivezy namakivaky ny sisin'ny Rhode Island, White Viandot sy Yurlovskaya dia naneso. Ny fifantenana dia natao tamin'ny dingana maromaro, vokatr'izany no nandova ireo karazam-borona avy amin'ny taranany ireo vorona ireo: ny fiaretana tsara, ny fahafahana haingana dia haingana any amin'ny toe-piainana iainana sy ny famokarana ambony. Ankoatra izany, manana vorona velona ny vorona velona, ​​izay manazava ny fielezan'ny zana-boromailala amin'ny ankamaroan'ny toeram-piompiana.
Fantatrao ve? Ny isan'ny akoho ety an-tany dia avo telo heny ny isan'ny olona.
Ny henan'akoho dia mety ho fantatry ny mpiara-belona aminy, fa tsy ny halavany ihany, fa ny loko manokana amin'ny volony ihany koa.
Ny loko no singa malaza indrindra manintona an'ity zary ity. Ny olon-dehibe dia manana volom-borona fotsy misy volom-borona manify, io loko io dia antsoina hoe Kolombiana. Amin'izay fotoana izay ihany, ny elatra, ny rambony ary ny tendany dia manana sisin-damosin'ny volom-borona mainty, izay manome ny vorona ho tsara endrika.
Vakio ihany koa ny momba ny henan'omby sy ny atody toy ny: Rhode Island, Oryol, Mosko, Kuchinsky Jubilee ary Yurlovskaya be vazivazy.
Ny toetra iray manan-danja amin'io vorona io dia ny felam-boninkazo, ny volo dia mafy, mifanakaiky sy mifatotra tsara amin'ny hoditra, noho izany ny akoho dia miaro amin'ny mangatsiaka, ny rivotra ary ny fahamendrehana.
May ny akohokely sy ny roosta dia tena lehibe, manana fanorenana mafy sy hozatra. Ny tratra dia mihodina, mandroso manosika, ny lamosina dia lehibe, ny elatra dia kely, voageja amin'ny vatany, fohy ny tongotry ny vorona, raha oharina amin'ny halavan'ny vatana. Ny rambony dia tsy lehibe loatra ary somary lavalava.
Angamba ny marika famantarana malaza indrindra amin'ny zana-trondro: loha vorona kely misy menaka mena, takolaka ary earlobes, baka kely nipitrapatraka, hely fohy, malalaka, somary misidina, rakotra karazana volom-borona mainty.
Zava-dehibe izany! Ny fisian'ny volon'ny mainty hoditra any ambadiky ny akoho iray dia mampiseho ny tsy fitoviana eo amin'ny zana-trondro sy ny fako.
Ny tombontsoa tsy azo antoka ho an'ny akoho main'ny May ho an'ny volana Mey dia fifehezan-tena voalanjalanja, ary ireo toetra ireo dia manavaka ny vehivavy sy ny roosters:
fanehoam-pitiavana ny fisian'ny ivelany;
fanekena ny mpitarika.
Na dia izany aza, ireo tanora, noho ny herin'ny tsy fahampian-tsakafo, dia afaka mampiseho toetra mampihetsi-po sy maharitra mandritra ny vanim-potoana mitombo.
Ny lazan'ny an'io biby io dia tsy isalasalana fa mifandray amin'ny vokatra mahavelona ataon'ireo solontenany. Indraindray, ny akoho andro dia manomboka somary somary somary mipoitra avy amin'ny karazana maoderina, saingy io fiverimberenana io dia naparaky tanteraka ny vokatra azo avy amin'ny atody. Amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny votoaty havanana, ny tsirairay dia afaka mametraka atody 200 eo isan-taona. Ny atody kely, ny lanjany dia tsy mihoatra ny 60 grama. Mahaliana fa, tsy toy ny karazam-borona hafa, ny Maivrehana May Day dia mihazakazaka na amin'ny vanin-taona ririnina noho ny fahafahany manamboatra ny tontolo iainana ivelany.
Fantatrao ve? Ny lokon'ilay akorandriaka dia miankina amin'ny karazana vorona. Misy akoho izay mitondra atody maitso sy mavomavo, ireo olona ireo avy amin'ny karazana Araucan, izay manana dingana manokana ao amin'ny rafitra ADN.
Raha ny lanjan'ny velona dia tsy ambany noho ny rahalahiny koa ny vorona. Ny akoho eo anelanelany dia mirefy 2.5 kilao, indraindray ny lanjany dia afaka 3 kg, ny rooste dia matetika kokoa, ny lanjany dia manatona 3.8-4 kg. Amin'izao tranga izao dia mitombo haingana ny fahavoazana eo amin'ny akoho toy ireny.
Mba hambolena ny akoho, handroso, ary hazakazaka tsy tapaka, dia zava-dehibe ny manara-maso akaiky ny sakafon'ny biby fiompy. Ny fototry ny sakafo dia varimbazaha manontolo (varimbazaha, vary orza, oats) arakaraka ny tahan'ny 50 grama isan'andro isan'andro. Ary ny maraina dia nomena alika ny vorona, manodidina ny 40-50 grama isaky ny olona, ​​ny fampifangaroana voamadilo voamaina ao aminy.
Ilaina ny manangona ny fihinanan'ny biby amin'ny mineraly isan'andro, indrindra fa ny fametrahana atody. Ny ankabeazan'ny mineraly lehibe dia ahitana kalsa, siramamy, voankazo ary sakafo. Amin'ny ankapobeny dia mihoatra ny 3 grama isan'andro ny habetsaky ny fanampiana toy izany, ary ampiana 0.5-1 grama sira ihany koa. Mba hamenoana ny filàna calcium, mihamitombo mandritra ny fametrahana, dia azo atao ny mampitombo ny ampahefatry ny sira amin'ny sakafo. Fitaovana kalsa
Tena ilaina ny vorona mba hahazoana vitaminina be dia be, ny loharano tsara indrindra avy aminy dia legioma sy zana-tany. Amin'ny lohataona dia tsara indrindra ny famotsorana biby fiompy mba handehanana, mba hahafahan'izy ireo mameno ny sakafony amin'ny zavamaniry sy ny voankazo vaovao. Amin'ny vanin-taonan'ny fararano-ririnina, ilaina ny manampy legioma voamaina sy voankazo ho an'ny sakafo isan'andro amin'ny 40-50 grama isaky ny olona isan'andro. Matetika ny karazana tsaramaso, tsaramaso ary ovy.
Ankoatra ireo voalaza etsy ambony ireo, ao anatin 'ny fihinanan' ny akoho dia misy ny fanampiana toy ny leven, izay loharanon 'ny vitaminina vondrona B, menaka trondro. Tsara ny mitadidy fa ny fihinanana vitaminina dia tsy latsa-danja noho ny tsy fahampian-tsakany, noho izany, tokony ampiharina toy izany ny dipoavatra: ny dipoavatra dia manome mihoatra ny 10 grama isan'andro, ary ny menaka trondro raha ilaina, vitsivitsy avy amin'ny sakafo maina. Raha ampy ny karazam-borona, dia mihena be ny ilany solika ilany.
Zava-dehibe izany! Raha tsy maimaim-poana ny akoho, dia ny tantsaha sasantsasany dia manome toro-hevitra amin'ny famokarana vatokely kely ho an'ny sakafo, izay, rehefa miditra ao amin'ny taratasy mivalona mahazatra izy ireo, dia manampy amin'ny fizahana sakafo amin'ny fomba voajanahary.
Manintona ny zana-ketsa ny volana Mey satria ny solontenany dia mampifanaraka tanteraka ny toe-piainana henjana, raha toa kosa ny drafitra misy anao dia ny fihazonana ny isan'ny biby fiompy, hampitombo ny vokatrao, dia tokony handinika tsara ny fikarakarana trano fialan-tsasatra ho an'ny vorona.
Ny akofa hoditra dia tsy maintsy entina amin'ny mpitsabo mpanimba sy ny mpitsabo mba hisorohana ny bakteria sy ny loto amin'ny fambolena;
ny rindrin'ny efitrano dia mila ilaozina sy miova làlana;
Ny gorodona ao an-trano dia rakotra lembalemba matevina na tsilo;
Ny akoho avy amin'io karazana zozoro io dia tsy dia mendri-piderana ary afaka miaina eny amin'ny tany, fa amin'ny fisian'ny fisakaizana mandritra ny vanim-potoana na mandritra ny vanin-taona mangatsiaka dia tsara kokoa ny manamboatra roost sy nosy. Ny tongony matetika dia eo amin'ny 80 cm ny haavon'ny tany.
Fa ny biby fiompy dia tsy maintsy afindra toerana ho an'ny mandeha, na dia eo aza ny fiainany sedentary. Ny corral dia azo ampifandraisina amin'ny trano, ary azo apetraka amin'ny fomba manokana;
Mba hiadiana amin'ny parasy ary hisorohana ny bika aman'endriny, ny akoho dia tokony avela "mandro" ao anaty vovoka, ny fasika mifangaro amin'ny lavenona dia tena mifanaraka amin'izany;
Ao amin'ny efitrano fikarakarana ny vorona dia tokony atao ny manadio sy manadio;
Ny mpihinana sy ny mpihinana dia miorina amin'ny ampahany amin'ny akanjo misy akoho, mba hahafahan'ny ondry iray mihinana amin'ny fotoana iray tsy misy fifandonana.
May ny akohokely dia safidy tsara ho an'ny fambolena ao amin'ny toeram-piompiana, noho ny toetrany:
hery fiarovana mafy ary fanoherana be loatra amin'ny aretina;
ambany ny fahatsapana ny hatsiaka, noho ny volom-borona;
fitondran-tena tony sy tsy fitondran'ny olon-dehibe;
ny fiantraikany eo amin'ny reny eo amin'ny vehivavy, ny tahan'ny haingo avo indrindra;
Ny fahafahana manatsara haingana amin'ny sakafo fihinanana;
Ny akoho avy amin'ny biby vaventy, Rhodonite, Master Grey, Australorp, Rosiana Crested sy Jersey giant dia manana ny fanoherana avo indrindra amin'ny aretina.
Ny fatiantoka manoloana ity karazam-borona ity, na dia misy aza ny vaovao momba ny sasany amin'ireo nuances:
Ny tovovavy tanora dia manana rafi-pitatitra tsy dia mendri-pitokisana ary mitondra fitandremana am-pahamendrehana;
Miaraka amin'ny sakafo mahantra, mihena ny vokatra.
Noho izany, mahazatra ny ahafantarana ny henan'ny henan'ny volana Mey dia afaka mankasitraka ny fahatsarany sy ny tombony azony. Azo antoka fa azo lazaina fa ny tsy fisehosehoana sy ny vokatra dia hahatonga ilay vorona ho tia indrindra amin'ny akoho rehetra.
Ny pervomaiskaya an'ny akoho dia nentina tany Kharkov tamin'ny fiampitana ny akoho Yurlov, nosy rhode ary viandot. Voantso izy ireo amin'ny hena sy ny atodin'ny akoho, saingy toa tsy mamolavola azy ireo isika.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Famaritana momba ny mofomamy amin'ny volana mey